Mini LNG Warshad-Sinocleansky Technologies Corp.
Halkan ayaad joogtaa: Hoyga>Codsiyada>Dhirta Mini LNG
Si loo buuxiyo heerarka tayada ugu sareeya ee LNG, waxaan soosaarnay naqshadeena gaarka ah ee xulashada iyo cabirka qalabka oo leh xalka farsamada ugu dabacsan. Awooddeenu waxay ku jirtaa xaqiiqda ah inaan awood u leenahay isku dubaridka baahida macaamiisha khibrada aan helnay sanadihii la soo dhaafay iyo inaan bixinno xalal loo habeeyay oo ku saleysan howlahayaga joogtada ah ee horumarinta mashruuca.
Dhirta waxaa lagu raraa qaybo qaybsan si loogu rakibo qiime fudud oo jaban. Qalabka waxaa lagu rakibay sida modules la ballaadhiyay, oo markaa lagu xidho inta lagu guda jiro rakibidda goobta oo leh tirada ugu yar ee isdhexgalka ee aasaaska horay loo sii abuuray.
Natiijo ahaan, waxaa jira hoos u dhac weyn oo ku yimid kharashka rakibidda iyo hawlgelinta.
SinoCleansky waxay siisaa tababar farsamo injineerada macaamiisha 'warshaddeena. Intaa waxaa sii dheer, rakibaadda goobta iyo hawlgelinta, dhammaantood waxaa lagu sameeyay kormeer taxaddar leh iyo mas'uuliyadda SinoCleansky injineerada goobta khabiir ku ah.
Gasooo, wuxuu ku raaxeysanayaa tikniyoolajiyadeena asaasiga ah iyo xirmo dhammeystiran oo MRC loogu talagalay Mini LNG….